Vatomandry : nifarana ny taom-panofanana ho an’ny fiahiana ara-tsosialy | NewsMada
Vatomandry : nifarana ny taom-panofanana ho an’ny fiahiana ara-tsosialy
Nametraka laminasa ny fiadidiana ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy (Cnaps), tarihin’ny tale jeneraly, i Arizaka Rabekoto Raoul. Ao anatin’izany ny fanatonana akaiky ny vahoaka, ny mpampiasa, ny mpiasa, hanazavana ny tombontsoa azo ao amin’ny Cnaps, sy ny fananana fiahiana ara-tsosialy. Nofaranana tany Vatomandry ny fitetezam-paritra amin’ity taona 2016 ity, natao ny 13-15 desambra teo. Nandray anjara ny solontenan’ny sendikà, ny mpiasa, ny mpampiasa, ny olomboafidy, sns.
Nambaran-dRandrianarijaona Charles Emilison, lehiben’ny sampandraharaha asa sosialy sy ny fahasalamana (Sass) ao amin’ny Cnaps, fa nahatratra 19 ny fiofanana vita nanerana ny Nosy ny taona 2016. Niompana tamin’ny fampahalalana ny lalàna amin’ny fiahiana ara-tsosialy. Niisa 1.385 ny olona voaofana. Nahatratra dimy kosa ny fiofanana mikasika ny fisorohana ny loza am-perinasa sy ny fiarovana ny ain’ny mpiasa, niisa 135
fahasalamana eo amin’ny tontolon’ny asa, ka ny 135 nahavita fiofanana.
Resy lahatra ny mpanatrika
Nilaza Rtoa Razanabavy Alphonsine, isan’ny mpiofana, fa “nanaitra ahy ny filazana fa mandray an-tanana ny mpiasa tra-doza eo am-perin’asa ny Cnaps. Eo koa ny fanonerana ny saram-pitsaboana. Ankehitriny, fantatray ny tokony hatao sy ny dokotera hatonina. Faharoa mikasika ny fisotroan-dronono, anisan’ny niadian-kevitra be nandritra ny fivoriana. Santionany, maka vehivavy tanora matetika ny lehilahy maty vady, koa ahoana ilay madimozely vao 18 taona? Mazava aminay ny valiny satria tsy manan-tsiny ny ankizy ka tsy mety very zo”.
Mpitantana ny hotely Rose Vao Vatomandry, nandray ny fiofanana Randriamanana Olivier. Nambarany fa “araka ny lesona azo tamin’ny fiofanana, hisy ezaka ataonay ao anatin’ny vondron’ny mpandraharaha amin’ny fisakafoana sy ny fiantranoana, hampahafantaranay azy ireo ny fiahiana ara-tsosialy ho an’ny mpiasa. Mazava aminay ny ilàna ny Cnaps, ny fanampiana omeny ny mpiasa,…Azo itokisana hametrahana ny tongotra voalohany ny Cnaps rehefa tonga ny fahanterana…”.